China Cable fire cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi enamathela ifektri abakhiqizi | Weicheng
Igama lomkhiqizo Ikhebula elingenamlilo
Incazelo Model 25kg / umgqomo
Ububanzi Bokusetshenziswa It is kabanzi ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi treatment ofwires and cables in power plants, industrial and
izimayini, ezokuxhumana ngocingo kanye nezakhiwo zomphakathi;
ingasetshenziselwa ukuvikela umlilo ngokhuni
izakhiwo, izakhiwo zensimbi, futhi okushayo
substrates ekubunjweni komhlaba.
Izinzuzo zomkhiqizo 1. Ifilimu elincanyana nokumelana nomlilo okuhle kakhulu 2. Ukwakhiwa Easy, ukuxubha, sishaye, njll
3. Ukumelana okuhle nomlilo nokumelana namanzi
4. Kwakhiwa ungqimba lwe-foam noluminyene lwesiponji ngemuva komlilo,
onomphumela omkhulu wokuvikela umlilo nokushisa
I-CDDT-AA yohlobo lwe-cable retardant enamathela uhlobo olusha lwengubo ecekela umlilo eyenziwe yinkampani yethu ngokuya ngamazinga we-GA181-1998 Ministry of security of public. Umkhiqizo wenziwe ngazo zonke izinhlobo zokuvimbela umlilo, i-plasticizer njalonjalo. Iyintambo ehamba phambili yamanzi nogesi ezweni.
Lo mkhiqizo usetshenziselwa kabanzi ukwelashwa okulibazisayo kwezintambo nezintambo ezitshalweni zikagesi, ezimayini, ezokuxhumana ngocingo kanye nasezakhiweni zomphakathi. Ingasetshenziswa futhi ekuvikeleni umlilo ezintweni ezishayo zesisetshenziswa sokhuni, izakhiwo zensimbi kanye nobunjiniyela obungaphansi komhlaba.
Ngaphambi kokwakhiwa kokumbozwa kwekhebula lomlilo, uthuli oluntantayo, ibala likawoyela kanye nama-sundries ebusweni bekhebula kufanele ahlanzwe futhi acwebezelwe, futhi ukwakhiwa kokumboza ngomlilo okungenziwa kungenziwa ngemuva kokuthi indawo yomile.
Isimbozo esivimba umlilo sekhebula sizofuthwa futhi sibhulanywe, futhi sizohlanganiswa ngokuphelele futhi sisetshenziswe ngokulinganayo. Lapho ukumbozwa kukhulu kancane, kungahlanjululwa ngenani elifanele lamanzi ompompi ukwenza lula ukufafaza.
Ukumbozwa kokungcola okungangenwa ngamanzi nokulwa kufanele kuvikelwe ngesikhathi nangaphambi kokwakhiwa.
Okwezintambo nezintambo ezinezikhumba zepulasitiki nezenjoloba, ukushuba kokumboza kungu-0.5-1 mm, kanti inani lokumboza lingaba ngu-1.5 kg / m, kukhebula elihlanganisiwe eligcwele iphepha lamafutha, ungqimba lwendwangu yengilazi luzosongwa kuqala , bese kuthi kusetshenziswe ukumbozwa. Uma ukwakhiwa kwenziwa ngaphandle noma endaweni enomswakama, kuzofakwa i-varnish efanayo.
Ikhebula elingenamlilo lizopakishwa emigqonyeni yensimbi noma yepulasitiki.
Ukumbozwa kwekhebula lomlilo kufanele kugcinwe endaweni epholile, eyomile nomoya.
Lapho uhambisa, umkhiqizo kufanele uvikelwe elangeni.
Isikhathi esisebenzayo sokugcina ikhebula elicishe umlilo livale unyaka owodwa.
Langaphambilini I-sealant evimba umlilo
Olandelayo: Indwangu engangenamlilo ne-Silicone Tape